Archive du 20161201
Hery Rajaonarimampianina Voahodidina mpanao afera
Tsy takona afenina intsony ny laza ratsin�ireo mpanolotsaina akaiky ny filoha noho ny resaka afera maloto. Maro dia maro izy fa 3 no tena malaza fa tsy azo kitikitihina, ka na i Hery Rajaonarimampianina aza dia toa entin�izy ireo amin�ny sangany matoa tsy afaka manitsy azy ireo, na dia efa voahoso-potaka matetika aza.
Rasolofo Andr� Be jiolahy ekonomika eto
Miankina amintsika rehetra ny hoavin�ny frankofonia, hoy ny mpahay toekarena sady mpandinika raharaham-pirenena, Andr� Rasolofo, satria be loatra ny jiolahy ekonomika eto.
Tetibola 2017 Maivana ny lafiny sosialy, hoy ny CCOC
Miankina loatra amin�ny fanampiana avy any ivelany isika ary tsy ampy ny resaka sosialy ao anatin�ilay tetibolam-panjakana,
Fanavaozana ny lisi-pifidianana Mpifidy 10 tapitrisa no tanjon�ny CENI amin�ny 2018
Hosokafana amin�ny fomba ofisialy any Toliara, anio alakamisy 01 desambra 2016 ny Fanavaozana isan-taona ny lisi-pifidianana 2016-2017 manerana ny Nosy.
Fanodinkodinam-bola 390 tapitrisa ariary Voatonona koa ny senatera Riana Andriamandavy VII
Miketrika mafy tamin�ny fanavotana ny ben�ny tan�nan�Ambohimahamasina Tsabo Pierre sy i Claudine Razaimamonjy, voafatotra tamin�ny resaka kolikoly sy fanodinkodinana vola mitentina 390 tapitrisa ariary,
Fizahana maso teny Ambohimanarina Natolotry ny depiote TIM maimaimpoana
"Ireo dokotera mitsabo sy mizaha fa Jesoa kosa manasitrana" no lohahevitra nanompanana ny hetsika Fizahana maso maimaimpoana natolotry ny Depiote TIM Rtoa Rasoanoromalala Horace
Taratasin�i Jean Hifanatrika �
Manakory ianao ry Jean malala ! Tsy hilamina intsony aloha raha ny fahitako anareo izao e ! Hifanatrika moa izany ianareo sy ny fivondronana anio ?
Faritra Analamanga Mananontanona ny pesta
Atahorana sahady ny aretina pesta eto amin�ny Faritra Analamanga, amin�izao fiandohan�ny fotoam-pahavaratra izao.
Sampana lal�na eny Ankatso Misy kolikoly avo lenta, hoy ny mpianatra
Tsy any amin�ny sampandraharaham-panjakana ihany no andrenesana kolikoly isan-karazany fa hatrany amin�ny fampianarana ambony miankina amin�ny fanjakana.
Kapiteny Faneva Mampitaraina ny mponina ao Tolagnaro
Miteraka resabe ary mampitaraina ny mponina ao Tolagnaro ny fepetra momba ny fivezivezen�ny olona ao an-tampon-tan�na noraisin�ny Kapiteny Ramilison Faneva Lucas, fantatry ny maro amin�ny anarana �Kapiteny Faneva�,
Scoop Digital Miala any indray ny "Adisanina fandio"
Tsy mandalo fotsiny ho an�ny tranom-pamokarana Scoop digital ny fandehanan�ireo mpilalao sarimihetsika kalazalahy ao aminy mitety faritra fa dia naravony ho tantara an-tsehatra entina hampitana hafatra amin�ny fiarahamonina ihany koa.
Fampiharana ny miralenta Mitarazoka ny eto Madagasikara
Betsaka ireo sonia efa nataontsika teto Madagasikara mikasika ny fampiharana ny miralenta saingy tsy mbola hita izay tena fampiharana azy.
Samia tonga saina e !
Fifandresen-dahatra amin�ny mpamatsy vola tanterahina any Paris renivohitra Frantsay indray izao no malaza taorian�ny fihaonana an-tampon�ny frankofonia
Fitiliana diabeta Nahasarika olona marobe
Fahombiazana tamin�ny ankapobeny ilay hetsika fitiliana diabeta maimaimpoana notanterahin�ny AMADIA ( Andiana Malagasy miady amin�ny Diabeta) sy ny Pharmadiff tetsy amin�ny lapan�ny tan�nan�Analakely omaly.